थपियो कफी संस्कृतिमा नयाँ आयाम, कफीमा यार्सागुम्बा | Rajmarga
काठमाडौँ । बझाङका २५ वर्षीय सत्य थापा र काठमाडौँका २७ वर्षीय विशाल चौलागाईंलाई युवा अवस्थामा नै केही फरक पेशा, व्यवसाय गर्ने हुटुहटी जागी रहन्थ्यो । आ–आफ्नै पेशामा रहेका उनीहरुको मनमा एक दिन नयाँ कल्पना फु¥यो, यार्सागुम्बासहितको कफीको व्यवयास गर्ने ।
व्यवसाय त गर्ने, तर कहाँ कसरी शुरु गर्ने, यार्सागुम्बा र कफीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? थापा र चौलागाईंले जुक्ति निकाले । थापाले यार्सागुम्बा र चौलागाईंले उपयुक्त स्थान खोज्ने निर्णय गरे । थापा–चौलागाईंको सामूहिक प्रयत्नबाट यार्सागुम्बा र कफी तथा स्थान सहजै व्यवस्थापन भयो । उनीहरुले तत्कालका लागि बझाङबाट यार्सागुम्बा ल्याउने र काठमाडौँ मलमा राख्ने तयारी गरे । अब बाँकी रह्यो कफी उपलब्ध गराउने कार्य । दुवै जना विश्वमै उत्कृष्ट कफीको मान्यता पाएको नेपाली कफी खोजीमा लागे । उनीहरुले ठमेलबाट अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री वितरण हुँदै आएको नेपाली कफी खरीद गर्ने निर्णय गरे ।
यार्सा–जाभाले प्रदान गर्ने एक कप कफीमा ३ ग्राम यार्सा र ७ ग्राम कफी मिश्रण गरिने उनीहरु बताउँछन् । यार्सा मिश्रित एक कप कफीे रु ५०० सम्ममा बिक्री भइरहेको छ । एउटा यार्साबाट कम्तीमा तीन कप कफी बनाउने गरिएको छ । त्यसो त यार्सा–जाभाको ‘यार्सागुम्बा विथ कफी’लाई अमेरिकाको कृषि विभागस्थित खाद्य सुरक्षा परीक्षण संस्थाले प्रमाणित गरिदिएको छ । क्याफेमा करीब रु ६० लाखको लगानी भइसकेको छ । ‘यार्सा विथ कफी’ को ट्रेडमार्क लिनका लागि थापा र चौलागाईंले प्रक्रियासमेत अघि बढाइसकेका छन् । –अशोक घिमिरे /रासस
Previous post: विद्युत् प्राधिकरणमा नयाँ व्यवस्था, नेताको हाजिर अनिवार्य, गर्लान् त हाजिर ?
Next post: नेकपाले लगायो प्रदेश इन्चार्ज र अध्यक्षको टुङ्गो, कहाँको जिम्मा कस्ले पाए ?
३ हजार ४ सय ४४ मेगावाटका १ सय २७ आयोजनाको लाइसेन्स रद्द : पैसा फीर्ता नहुने